Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/06/2020)
Uma lokhu isikhathi sakho sokuqala ehamba ngesitimela, Akungabazeki-ke uzoba owokuqala kwabaningi. ngobuqotho, noma ubani ukuthi Ngekubuka ehamba ngesitimela ithuba waya ngokupheleleyo crazy phezu kwayo! Kungani? Ngoba kungcono omangalisayo! Ukuphikisana engenabuntu indiza ugibele, ungakhululekile ibhasi izinkambo noma ugibele endleleni-futhi-wemfanelo ngemoto, uhambo isitimela ephephile, esheshayo kodwa emangalisayo ebukekayo futhi yothando. Omunye angase athi ehamba ngesitimela ukuxuba wangempela Virginia Woolf enhle engekho nokufakaza kwanamuhla usizo. Ah, uzoyibona wena kakade.
Asikwazi ukuqinisekisa uzoba ukuthi u-Ethan Hawke – Julie Delpy zemininingwane Journey isimo sakho sokuqala ngesitimela (Oh, Woza, sonke sike sayibona futhi swooned phezu I Ngaphambi Trilogy, ngasese, enethemba sizoba okufanayo love story kwenzeke kithi.) Phula aphume igobolondo wakho bese uyeke nakho kwenzeka. Bangaki ezihlakaniphile, angalindelekile, nezingxoxo fun ngeke ube? Okuhlangenwe nakho nokuthola ukuze uxhumane nabantu abanamasiko nezinkambiso ezihlukahlukene umuzwa kumnandi! Angeke wazi ukuthi bangaki amahle ubungani uzoba ukwakha, bangaki asebeke bangenza ngathatheka uzoba noma zingaki obumangalisayo nobuntu uzoba ukuhlangabezana. Uma ungenaso namahloni kakhulu, kube owokuqala ukuba aphule ice futhi inkulumo abantu ozithandayo.
Ukuhamba ngamaqembu nangezinsuku ezikhethekile kwehlisa intengo kakhulu ngokubhadela ithikithi isitimela (yebo, ungakwazi empeleni ukuthola isaphulelo on ithikithi lakho ukuze, ukusho, Trenitalia uma uya ku ngezimpelasonto). Iphinde kukunika othile ukwabelana nakho futhi abone izinto ngombono zabanye abantu. Lokho, futhi – ukubanjwa esiphuza iYurophu ezweni langaphandle nakanjani kangcono phakathi abantu obaziyo kuka nikwenza solo… kukhona thina ilungelo noma thina kwesokudla?
Jabulela wakho uhambo ngesitimela, zinike imvume uphumule futhi amukele konke mayelana uhambo lwakho isitimela! Enokwethenjelwa kakhulu ukubeka ukubhuka amathikithi akho isitimela saveatrain.com nakanjani, ngakho – uthole Movin '!